iKON အဖွဲ့ရဲ့ Bobby က YG Entertainment ရဲ့ စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုတွေအကြောင်းပြောပြခဲ့
On February 22, 2018 February 22, 2018 By Naing Naing
iKON အဖွဲ့ရဲ့ Rapper အဆိုတော်တစ်ဦးလည်းဖြစ် သီချင်းရေးဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ Bobby က သူ့ရဲ့ Agency ဖြစ်တဲ့ YG Entertainment ရဲ့ အနုပညာရှင်တွေအပေါ် စည်းကမ်းတင်းကြပ်ပုံတွေကို MBC ကနေထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ ‘Radio Star’ အစီစဉ်မှာ ဖွင့်ဟပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Bobby ဟာ ဒီအစီစဉ်မှာ iKON အဖွဲ့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့သီချင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ YG Entertainment နဲ့ ဒီAgency မှာရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအားလုံးဟာ မိသားစုလို ခင်မင်ရင်းနှီးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကို စည်းကမ်းတင်းကြပ်တဲ့ မိသားစုကြီးတစ်ခုလိုပါပဲလို့ Bobby လေးကပြောပါတယ်။ Bobby ဟာ YG Entertainment ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Yang Hyun Suk နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတယ်လို့လည်း ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“သူအခုတလော Yang Hyun Suk ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံနေရတယ်.. သူ့ရဲ့ အပူပင်ကြောင့်ကြနည်းတဲ့ Style နဲ့ ထင်ထင်ရှားရှားဝတ်စားတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ Fashion တွေက Yang Hyun Suk ရဲ့ မျက်လုံးတွေကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်ထင်တယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ MC တွေနဲ့ ဧည့့်သည်တွေ အံ့အားသင့်ခဲ့ရတာလေးတစ်ခုကတော့ Yang Hyun Suk က ‘Radio Star’ ကိုလာဖို့ Bobby ရဲ့ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေကို သူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပဲ။
iKON အဖွဲ့သားတွေဟာ သူတို့ Agency က သူတို့ကို Dating နဲ့ပတ်သက်ပြီး တားမြစ်ထားရုံတင်မကဘဲ အပြင်သွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ရဲ့ Manager ကို အသေးစိတ်ပြောပြနေရပါတယ်တဲ့။ သူတို့နေတဲ့အဆောင်ရဲ့ အရှေ့မှာရှိတဲ့ Store ဆိုင်လေးသွားဖို့ကိုတောင် Agency ကို Report တွေအများကြီးတင်ရပါတယ်လို့ ဆိုလာကြပါတယ် (Oppa လေးတွေသနားပါတယ်?)။ ပြီးတော့ “သူတို့တွေအားလုံး Blackpink အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်း လုံးဝတွေ့ဆုံခွင့်မရှိပါဘူး။ သူတို့အားလုံးကို Agency က ကားမောင်းလိုင်စင်တောင် ဝင်မဖြေခိုင်းပါဘူး” လို့ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Oppa တွေ အရမ်းကိုစည်းကမ်းတင်းကြပ်လွန်းလို့ ဘယ်လောက်တောင်စိတ်ညစ်နေကြလည်းမသိဘူး။ ခံစားချက်တွေကိုပြောသွားတာ သနားဖို့တောင်ကောင်းလေရဲ့ ….. ?
A post shared by 바비 (@bobbyindaeyo) on Jan 26, 2018 at 11:46pm PST
PREVIOUS POST Previous post: စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သီချင်းအခွေအသစ် ထွက်တော့မှာလား?
NEXT POST Next post: Demi Lovato က သူမ Drake အကြောင်းအိပ်မက်မက်တယ်လို့ ပြောကြား